Teboka vavaka hanoherana ny varavarana mihidy | TOKO VAVAKA
Home vavaka Teboka vavaka hanoherana ny varavarana mihidy
Teboka vavaka hanoherana ny varavarana mihidy
Androany isika dia handray anjara amin'ny teboka fivavahana amin'ny varavarana mihidy. Ny soratra masina dia namariparitra an Andriamanitra ho Andriamanitra azo atao rehetra ary izay manokatra ny varavarana mihidy. Betsaka ny olona izay nohidian'ny fahavalo ny varavaran'ny fahombiazany. Hanokatra varavarana toy izany ny Tompo anio amin'ny heriny. Voasoratra; Hanao zava-baovao aho, koa ankehitriny dia hiposaka izany, satria tsy fantatrao izany. Hanao lalana any an-efitra sy ony any an'efitra aho. Midika izany fa Andriamanitra irery ihany no ampy hamorona làlana tsy misy lalana. Na dia nakatona aza ny varavarana dia afaka misokatra ho an'ny olona iray ny herin'Andriamanitra.
Ny bokin'ny fanambarana Apokalypsy 3: 7:
7 Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia: Izao no lazain'i Ilay Masina, Izay Marina, Ilay manana ny lakilen'i Davida, Izay mamoha, nefa tsy misy mamidy; ary manidy izy, nefa tsy misy mamoha. Ny mampifandray an'io andalan-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly io dia hoe manana ny lakilen'ny varavarana rehetra Andriamanitra, ary na dia misy varavarana mihidy aza tsy manana lakile dia manana fahefana Andriamanitra handrava azy. Tsarovy ny soratra masina ao amin'ny bokin'i Izaia 45: 2 Hialoha anao aho, ary haongako ny tendrombohitra; Hotorotoroiko ny vavahady varahina ary hotapahiko ny hidy vy. Androany, manao didy aho fa ny fanahin'ny Tompo no handeha eo alohanareo ary hanorotoro ny varavaram-by rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny varavarana mihidy eo alohanao izay manakana anao tsy hahita fahombiazana dia horavan'ny Tompo amin'ny varavarana amin'ny anaran'i Jesosy ny varavarana.
Zava-dehibe ny fahalalana fa ny varavarana dia tsy hohidiana raha tsy miorina zava-tsarobidy sasany. Rehefa misy varavarana mihidy eo alohanao dia toky ianao fa misy fananana sarobidy ao. Izany no mahatonga ny fahavalo matetika mampiasa varavarana mihidy ho sakana amin'ny fandrosoan'ny maro. Ny fanahin'Andriamanitra dia nanambara fa olona maro sahady no efa tonga eo amin'ny fahombiazany, saingy ny toerana nampiantranoana ny fahombiazany dia mihidy. Nakaton'ny fahavalo ny varavarana hisakanana ilay olona tsy hiditra amin'ny zava-bitany. Andriamanitra dia voatendry hanao izay azony atao ihany. Nampanantena izy fa horavany isaky ny varavarana mihidy mba hahafahan'ny olony mahazo fitahiana. Ity torolàlana am-bavaka amin'ny alàlan'ny fanahin'Andriamanitra ity dia manome anao teboka vavaka amin'ny varavarana mihidy, ary mivavaka aho mba hihaino ny feon'ny fifonanao Andriamanitra.
Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hitsangatsangananao anio momba ny toe-javatra iainako ary ataovy izay azonao atao amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Tompoko, mivavaka amin'ny herinao aho. Handrava ny varavarana mihidy amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ny varavarana rehetra izay nakatona tsy araka ny fitahiako sy ny fivoarako dia manome didy aho fa ny varavarana toy izany dia rava amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, ny varavarana rehetra izay nakatona tsy hahita ny zava-bitako, ka nahatonga ahy hiasa andro aman'alina ho an'ny vokatra kely, mivavaka aho mba ho vaky ny varavarana toy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lehilahy sy ny vehivavy ratsy fanahy rehetra izay nanidy ny varavaran'ny fahombiazako ary nitana ny lakilen'ny fahombiazako, Tompoko, mivavaka aho mba hitsangananao ary hanaporofo fa Andriamanitra ianao amin'ny raharahako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ianareo varavarana mihidy rehetra manohitra ny zanako, ny afon'Andriamanitra manokatra anao dieny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny varavarana rehetra izay nakatona hamelezana ny zanako izay mahatonga azy ireo tsy hahatratra zava-tsoa dia azon'ny vadin'izy ireo tsy misy fihenjanana, mivavaka aho mba hanokatra varavarana toy izany amin'ny anaran'i Jesosy ny kotrokorana.
Ry Andriamanitr'i Elià, mitsangàna ankehitriny amin'ny afonao, ka aringano ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay nanakana ahy sy ilay namako; Mivavaka aho mba handravan'ny afon'ny Fanahy Masina lehilahy sy vehivavy toy izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, ny famaranana rehetra dia mihidy amin'ny famindram-pon'ny Tompo. Mivavaka aho mba hipoitra eo amin'ny fiainako anio ny famindram-ponao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra hoe: Izaho hiantra izay hamindrako fo sy hiantrako izay hiantrako azy. Tompoko, mivavaka aho fa amin'ny famindram-po dia isainao aho fa mendrika ho ao amin'ny lisitry ny olona izay hamindranao fo amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo Andriamanitra ô, niteny tamin'ny teninao ianao fa handeha eo alohako ary hanakatra toerana avo. Ny teninao dia nilaza fa hanorotoro ny varavarana varahina ianao ary hanapaka ny varavarana vy. Mivavaka aho mba handravan'izy ireo ny varavarana vy rehetra izay nakatona hamely ahy anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, avelao ny tobin'ny fahavalo rehetra hanohitra ny fiainako ho voaloto amin'ny fisavoritahana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famoriana olona rehetra izay mifanohitra amin'ny fivoarako eo amin'ny fiainana dia mivavaka aho mba hampifangaro anao eo afovoany anio amin'ny anaran'i Jesosy. Manome didy aho fa hataonao tsy mahomby ny asan'ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, fa voasoratra hoe: Homeko anao ny lakilen'ny fanjakan'ny lanitra; ary na inona na inona fehezinao etỳ ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanao etỳ ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra. Mitaky ny lakilemako amin'ireo harena any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy aho. Nampanantena ahy ianao fa na inona na inona feheziko etỳ ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra, ary izay rehetra vahako etỳ an-tany dia hovahana any an-danitra. Novakiako tamin'ny anaran'i Jesosy ny varavaran'ny harena mihidy rehetra.
Ray ô, misaotra anao aho noho ny vavaka voavaly, misaotra anao aho satria manomboka izao dia manomboka mahita fiovana eo amin'ny fiainako aho, misaotra Tompoko satria Andriamanitra ianao, asandrato amin'ny anaran'ny Jesosy ny anaranao.
vavaka manoloana varavarana mihidy
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fikorontanana
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanemorana
mafe 29 Oktobra 2020 Amin'ny 12:24 hariva
Toy ny hoe te-hitahy ahy tokoa i Gd, saingy tsy maintsy manao ny tsara aho mivavaka mba hitrangan'izany
monteiro vunge 26 Novambra 2020 Amin'ny 9:22 maraina
Irmáos em Cristo, por favourite au meu a minra vida e na vida dos meus Pais e Irmãos, Irmães, Sobrinhos, Sobrinhas, Avõs, e Familias no seu todo.
monteiro vunge 26 Novambra 2020 Amin'ny 9:24 maraina
Irmáos em Cristo, por favourite a me orar na minha vida e na vida dos meus filhos, e meus Pais e Irmãos, Irmães, Sobrinhos, Sobrinhas, Avõs, e Familias no seu todo.
Rosy 13 aprily 2021 Amin'ny 4: 51 hariva
Andriamanitra hitahy anao mivavaka mandrakariva aho teboka vavaka amin'ny olana rehetra Misaotra
60 Ireo teboka amin'ny vavaka ho an'ny fanosorana vaovao
Zava-bavaka 30 ho an'ny fandresena ny herin'ny razana
45 Ny fivavaha mba hisian'ny fandrosoana eo amin'ny fiainana